Global Voices teny Malagasy » Tsy manana olana lehibe amin’ny vaovao faikany i Kroasia, hoy ny mpanolotra vaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Novambra 2019 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Metamorphosis Foundation Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Kroasia, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Nivoaka voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency  , tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mpanangom-baovao ara-politika i Damira Gregoret  ary mpampita vaovao amin'ny RTL Kroasia. Tamin'ny Oktobra 2018, nanao lohateny tao amin'ny fampitam-baovao teo an-toerana izy rehefa avy nametra-panontaniana tamin'ny Praiminisitra Kroasiana Andrej Plenkovic nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, izay namaliany  azy tamin'ny fomba mieboebo hoe:”Tena mahafinaritra ianao ry Damira.” Niala tsiny tamin'ny ampahibemaso izy taty aoriana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/18/144713/
 pejiny Facebook : https://www.facebook.com/Damira-Gregoret-1693693090919069/
 Meta.mk News Agency: https://meta.mk/en/463298/